भिडियो Archives - Daily Lokmandu
११ बर्षिया “भावना” भन्छिन, बच्चा जन्माउन साथ “खेल्न” गए (भिडियो कुराकानी)
११ बर्षमा आमा बनेकी भावना बच्चा जन्माउन साथ साथी संग खेल्न गएको कुरा बताउछिन । उनी संगको कुराकानी अन्तिममा राखिएको छ ।उनका बारेमा २१ औ शताब्दीमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीले भगवान्को प्रतीक मानेको चन्द्रमामा मान्छेले पाइला टेकिसक्यो, मङ्गल ग्रह मान्छेको हत्केलामा छ। तर कस्तो विडम्बना। हामी कति दयनीय अवस्थामा छौं ? ११ वर्षीय बालिकाले बच्चा जन्माउदा माया र सद्भाव पाउनुको सट्टा छि छि र दुर दुरको गर्ने यो हाम्रो कस्तो समाज। नेपाली समाज यति डरलाग्दो गरी विकसित भइरहेको छ कि आजभोलि भनेर पनि साध्य छैन। सानोदेखि ठूलासम्म तलदेखि माथिसम्म र उच्चदखि निम्नसम्म हेप्ने चेप्ने र एकले अर्कोलाई कागती निमोठेजस्तै गरी निमोठ्ने चलन व्याप्त हुँदै गएको छ। यो अन्धबिस्वासको भण्डारले नेपालमा अझै कतिलाई जीवन जिउन कठिन पार्ने हो कुन्नि ? संसार कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो तर नेपाली समाज भने अझै कुसंस्कारको अँ
Apr282019 by Kusum ThapaNo Comments
सानैमा एउटा खुट्टा गुमाएकी निलम ढुंगानाको ६ महिनाकी छोरी हुँदा डिभोर्स भयो तर श्रीमानको कुरा गर्न चाहिनन् [भिडियो हेर्नुहोस ]
चर्चित नृत्याङ्गना निलम ढुंगाना एक खुट्टाको सहाराले सवलाङ्ग सरह उत्कृष्ट नृत्य गरेर देश विदेशमा ख्याती कमाएकी निलमको बलराम बस्नेतसँग १० वर्षअगाडि वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । उनीहरुको एक छोरी छिन् । ०६४ सालमा भयंकर दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्न सफल निलमको दुर्घटनामा परेको एउटा खुट्टा गुमेको थियो । स्कुल जान पुलको पेटीबाट हिँडिरहेकी निलम र उनकी साथी अन्जना राईलाई ओभर लोड भएको ट्रकले किच्दा अन्जनाको दुर्घटना स्थलमै मृत्यू भएको थियो । नीलम बाँच्न त सफल भइन् तर देब्रे खुट्टा सधैंका लागि गुमाएकी थिइन । भिडियो हेर्नुहोस
कृष्ण र रुपाले डष्टबिनमा भेटिएका बच्चालाई छोरा बनाए ! सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुहोस)
एउटा सुन्दर घर नेपाल स्नेही काखमा आज तपाईहरुकै प्रिय कृष्ण वलि र रुपा पुलामी मगर वलि पुगे । सबैको साथ र सहयोगले खुशी हुन थालेका कृष्ण र रुपा त्यहां रहेका मनरोगी दिदी बहिनीहरु र अशाहय बालबालिकाहरुका लागि सहयोग बुझाउन र दुख सुख साट्न पुगेका थिए । नेपाल स्नेही काखकी आमा श्रीनेहा पोख्रेलले कृष्ण र रुपासंगै हामीलाई पनि आत्मिय स्वागत गर्नुभयो । बिविध समस्या र अप्ठ्याराहरुमा चलिरहेको नेपाल स्नेही काखमा हाम्रा अघिल्ला भिडियोहरुको प्रभावले केहि सहजता देखिन थाल्दैछ । सहयोगीहरुसमय समयमा सहयोग गर्न आईपुग्छन्, यद्यपी स्नेही काखका लागि आफ्नै जग्गामा मनरोगी दिदी बहिनीहरु र अशाहय बालबालिकाहरुका लागि बासस्थानबनाउनु कठिन बनिरहेको छ । सहयोगीहातहरुले साथ दिए यो काम सम्भव छ । स्नेही काखमा पुग्ने बित्तिकै रुपा वलि भविष्यलाई माया व्यक्त गर्न थालिन् । भविष्यलाई बिर्सनु भएको छैन नि । पशुपति क्षेत्रमा केहि
एउटा नमुना बिहे ! मगरकी छोरीलाई बिश्वकर्माको छोराले बाजा बजाएर मागी बिवाहा गरे ! (भिडियो सहित)
माजमा जातीय विभेद, छुवाछूतका घटनाहरु सामाजिक संजालमा प्रत्येक दिन जस्तो देखिन्छ ।नकारात्मक मात्र होइन सकारात्मक सोचका ब्यक्ती , परिवार पनि छन् समाजमा भन्ने यो बिवाहित जोडीले देखाएका छन् । कतिपय घटनाहरु अन्तरजातीय बिवाहा गर्दा परिवार र समाजबाट बिस्थापित र विभिन्न बाहनामा छुट्टाइएका उदाहरण छन् ।एउटा यस्तो जोडी २२ बर्षिया बिजय बिश्वकर्मा र बिस बर्षिया प्रमिला मगर एउटै गाउँ निवासी हुन् ।नबलपुर चोरमारा बजारमा स्थायी घर भएका यी जोडी सानै देखिका साथी हुन् ।बालपनको साथी सगै एउटै स्कुलमा पढन थाले पछि उनिहरुको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भएको थियोे । पछि बिवाहा गर्ने निर्णय गरे उनिहरुको प्रेमलाइ दुबै पक्ष परिवारले सहमति गरे पछि मागी बिवाहा भएको छ ।समाज परिबर्तनको यो सकारात्मक संदेशको रूपमा लिएर उनिहरुको बिवाहालाई संमान साथै विभिन्न सामाजिक संजालमा सबैले बधाइ तथा शुभकामना दिएका
छिमेकिको अगाडी गाली गरेको भन्दै आफ्नै आमाको राम धुलाई ! आँखाबाट बलिन्द्र आँसुको धारा बग्दा पनि पिट्न छाडेनन्…
आफ्नै आमालाई छोराले पिटेको एक भिडियो सामाजिक संजालमा देखा परेको छ। आमालाई झाडुले पिट्दै गरेका एक युवकलाई भिडियोमा देख्न सकिन्छ।भारतीय सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेको यस भिडियो कर्नाटकको बेंगलुरु रहेको छ। आमालाई झाडुले पटक-पटक हानिरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ।परिक्षामा कम नम्बर ल्याएको भन्दै ती महिलाले आफ्नो छोरालाई गालि गरेकी थिइन्। छिमेकिको अगाडी गालि गर्दा आफ्नो बेइजत भएको भन्दै ती युवकले आफ्नो आमालाईनै कारवाही गरेका हुन्। १७ वर्षीय त्यस पुरुषले आमालाई पिट्दै गर्दा त्यहीं भएकी आरोपी युवकको बहिनिले भिडियो बनाएकी थिइन्। आमालाई पिट्दै गर्दा युवक भनिरहेका हुन्छन्,” जे गर्नु छ गर तर तिमीलाई पनि तह लगाएरै छाडछु।
इराकमा नेपाली चेलीको हत्या रहस्यमय, ,,,,,,,,,,,,रिप लेखेर श्रद्धान्जली दिनुस मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
तपाईले खोज्नुभएको भिडियोमा यो पोष्टको अन्तिममा राखिएको हुनाले भिडियो हेर्न अन्तिमसम्म स्क्रोल गर्नुहोला । कुकुरसँग किन यौन सम्पर्क गर्छन् महिलाहरु हेर्नुहोस् आज थाहा पाउनु होस ।। डा. राजेन्द्र / म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ भनिन्छ, पिसाबमा यसको असर देखिन्छ ? असर परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुकुर सँगको यौन सम्पर्क यौन मानिसको एक अभिन्न कुरा हुँदाहुँदै पनि यो एकदम गोप्य कुरा पनि हो । यौनसम्बन्धी कतिपय क्रियाकलापको सन्दर्भमा समाजको आ–आफ्नै नियम एवं मूल्य–मान्यता हुन्छ । सामान्यत: म
यो संसारमा थुप्रै बिषयहरु बिवादले भरीएका छन,त्यी बिवादहरु मध्य यो पनी एउटा विवाद हो की के यो संसारमा भगवान छन? धेरैले मान्ने गर्दछन की भगवान छन तर कतीपयले भने भगवानमा बिशवास राख्दैन्न। मानीश द्वारा बनाईएका सबै धर्म अनी समाजमा भगवान भएको मानीन्छ। जस्लो यो पृथ्वी,जिब जन्तु,आकास,समुन्द्र लगायत सबै सजीब तथा निर्जीब प्राणीहरुको रचना गर्यो हामीलाई लाग्छ त्यही भगवान हो । तर कुनै पनी धर्ममा भगवानको प्रतक्क्ष अस्तीत्व भयको प्रमाण भेटीदैन। तर फेरी पनी हामी भगवानलाई मान्छौ कीनकी हामी बच्चा देखीनै यहीं देख्दै अनी सिक्दै हुर्केका हौं।।त्यसैले हाम्रो यो सोच बसीसकेको छ की भगवान साँच्चीकै छन। हिन्दुहरुका लागी ब्रह्मा,बिस्नु,महेश अनी मुसलवानहरुका लागी अल्हा र क्रिच्शियनहरुका लागी गडको रुपमा भगवान मानीन्छ। हामी मानीसहरुले नै आआफुले भगवानको रंग,रुप र प्रकार दिएका हौं, दुई मीनेट चीसो दिमागले सोच्नुह
बुढा संग सेक्स् गर्दा इमोशन नै आउँदैन, किन होला (भिडियो सहित) – जिवनशैली
बुढा संग सेक्स् गर्दा इमोशन नै आउँदैन, किन होला (भिडियो सहित) – जिवनशैली एजेन्सी – महिला र पुरुषबीच यौनसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । यौनसम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? सामान्यतयाः रातको समयमा यौनसम्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, यौनसम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनसम्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको शर
पंहेलो र कालो दाँत यसरी टलक्क टल्काउनुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस सिक्नुहोस ।
भनिन्छ दाँत बलियो भए आँत बलियो हुन्छ । तर आजभोलि गलत खानपान अनि नसालु पदार्थ अम्मल गर्ने बानि जस्तै खैनि चुरोट सुर्ति गुट्का जस्ता कुराहरूका कारण तपाइ हाम्रो दाँत नराम्रोसंग बिग्रेको हुन्छ र कालो अनि पहेलो हुन्छ। जसको कारण शारिरिक शुन्दरता जतिसुकै भएपनि पहेलो र कालो दाँत हुदा त्यसमा निकै नै असर गर्ने गर्छ। यदि तपाइ पनि यस्तै दाँतको समस्याले पिडित हुनुहुन्छ भने एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि जस्तासुकै खराव दाँतलाइ हिमाल झै टलक्क टल्काउनुहोस जस्तोसुकै पहेँलो वा खिया लागेको दाँतलाई २ मिनेटमै मोतीजस्तै चम्काउने गोप्य घरेलु औषधी, जानीराखौँ दाँत पहेँलो हुने एक आम समस्या हो । कोही व्यक्तिको जत्ति नै सफा गरेपनि यो समस्या देखा पर्छ भने कोहीको आफ्नै लापरबाहीले यो समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । अचेल प्राय मान्छेहरु अनेक किसिमका सुर्तीजन्य पदार्थ, धुम्रपान वा मद्यपानको सेवन गर्छन् । हाम्रो स्वास
भिडियो अन्त्यमा छ ।। अवश्य हेरेर सेयर गर्नुहोस नत्र तपाईको जिवनमा ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ ।। यो पनि पढ्नुहोस: तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। भारतका प्रख्यात उत्प्रेरक विवेक बिन्द्राले २०७५ माघ ४ मा सबैभन्दा अस्थिर सरकारको नाम राखेर एउटा भिडियो युट्युबमा राखे। उक्त भिडियो रातारात भाइरल भयो। धेरै नेपालीलाई उक्त भिडियोमा भएका धेरै कुरा सत्य छैनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन रातारात फैलियो? यसको कारण, उक्त भिडियोको आकर्षक फोटो चित्र हो, जसमा लेखिएको थियो- ‘नेपालमा १७ वर्षमा १७ प्रधानमन्त्री बदलिए।’ उनलाई धेरै नेपालीले धन्यवाद पनि दिए। मलाई भने एउटा प्रश्नले घोच्न थाल्यो- के नेपाल बन्दै बन्दैन त? हामी नेपालीले दुनियाँका सबै
लेखी पाथिभरा देवीको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला,
त्रिपुरा बहुमुखी क्याम्पस जग खन्ने क्रममा भेटियो १९ तोला सुन र १ सय ३२ तोला चाँदी …हेर्नुहोस्
अब २५ / ३० हजार कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने दिन गए : स्वदेशमै रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छौं भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिए खुशीको खबर
अब देशमा धनि र गरिव भन्ने नै हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने : ‘मजदुरका दुःखका दिन गए’
२०७६ सालमा यी ६ राशिलाई पर्दै छ महाँसंयोग सहितको भाग्यफल, कुन राशिलाई कस्तो फाईदा देखि असर (5)
यी ९ वटा मन्त्र, जसले मानिसको जीवन नै परिवर्तन हुने विश्वास गरिन्छ ! जप्नुहोस् (4)
के कारणले मृगौला फेल हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ! शेयर पनि गर्नुहोस (4)
बिचरा ! यहि त आश थियो वृद्ध बुवाआमालाई तर सरकारले गर्यो एक्कासी वृद्धभत्ता हटाउने तयारी,… (4)
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ,एक चोटी पढ्नैपर्ने (4)
रमेश जी मिल्छ भने बाकि संसार हेर्न मेरो दुबै आँखा लिनुहोस् – ज्वाला संग्रौला (3)
पूर्वयुवराज पारस डिस्चार्ज : रक्सी चुरोट नछुनू ! (3)
पुरानो भन्दा पुरानो दादलाई ३ दिनमै निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ (3)
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं ! (100)
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर : यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने… (87)
पुरानो भन्दा पुरानो दादलाई ३ दिनमै निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ (76)
साबधान ! आमा-बुबाको यस्तो सानो गल्तिले नै “तेस्रो लिङगी”जन्मिनछन्!! (37)
११ बर्षिया “भावना” भन्छिन, बच्चा जन्माउन साथ “खेल्न” गए (भिडियो कुराकानी) (36)
कण्डम बिना नै बच्चा नबस्नेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? यस्तो छ डा. नुतनको सल्लाह (29)
आमा ! हामीलाई विचल्लीमा छाडेर गएपनि तिमि त खुसी छौ होला है ! मनमा बुवा नर्फकने थाहा भएपनि… (25)
हर्ट–अट्याक हुनुभन्दा १ महिनाअघिदेखि शरीरले दिन्छ यस्ता संकेत: बेवास्ता नगरौ -मृत्युबाट बचौं (25)